Dib u eegida CLS DC-10-30F
Dib u eegida CLS DC-10-30F sano 3 4 bilood ka hor #195
Anigu ma been sheegayo, waxaan ahay taageere shimbiraha engineka 3 ah. Marwalba waad ahayd. Waxaad RARELY ka arki doontaa wax kasta oo ka yar makiinadaha 2.
Tani waa shimbir aad u fiican. waxay la timaadaa waxyaabo badan oo kala duwan, faahfaahin fiican oo fiican, wax ka qabad badan laakiin waxaa jira waxoogaa dhibaato ah oo leh ...
Waxaad aragtaa, miisaanka ugu badan shimbirkan waxaa ku qoran liiska 6,600; Max Fuel waxay ku qoran tahay 36,650 US gal; iyo miisaanka dheeraadka ah wuxuu ku qoran yahay liiska 572,000.
Hadana, hadaad fiiriso FSX... waxay muujineysaa culeyska guud ee '558,000lbs' iyo shidaalka la ogolaan karo sida xNUMX galans, farqi u dhexeeya xNUMX gallons.
Isla markiiba waxaan sameeynayaa duulimaad 6305.0 ah, waxaanan hoos u dhigi doonaa 7%. Waxaan ku socdey Mach .82 (taasoo ah xawaarida caadiga ah) ee cagaha 35,000, waxaanay la wareegtay taangiyo buuxa. Uma baahnid in la yiraahdo ... Anigu ma dhigi doono inta ka hartay 4.5 ee w / o leh in la dejiyo ....
Anigu waxaan messedahay CLS si aan u arko haddii ay ka warqabaan tan, waxaanan sugayaa inaan dib u maqlo.
Uma yeelin habab ILS ah (oo aan loo isticmaalin lopeter-ka caruurtu waa lakab kala duwan), laakiin ma filayo in ay adagtahay in la sameeyo.
Ilaa iyo hadda ... Waxaan siin lahaa shimbir this A A- (haa ah isbedel My lol). Markaan mid ka mid ah halkan ka soo dejiyo Thomas Ruth, waxaan dib u eegayaa dib u eegis ku saabsan lafahaas Might waa maalin ama maadaama aan marar dhif ah ka yareynin duulimaad farabadan marka ay timaado shixnad
Dib u eegida CLS DC-10-30F sano 3 4 bilood ka hor #199
ILS waa mid toos u ah shimbirkan, mahadsanid. La Siiyay Waxaan Isticmaalay Maaboosyo Muujiyo, laakiin weli Lol Weli kama jawaabin CLS ....